''သမီးဖြစ်သူက အနုပညာဝါသနာပါပေမယ့် ငယ်သေးတဲ့အတွက် ကျောင်းစာကိုပဲ ဦးစားပေး လုပ်ခိုင်းထား ပြ? - Yangon Media Group
”သမီးဖြစ်သူက အနုပညာဝါသနာပါပေမယ့် ငယ်သေးတဲ့အတွက် ကျောင်းစာကိုပဲ ဦးစားပေး လုပ်ခိုင်းထား ပြ?
”သမီးဖြစ်သူက အနု ပညာဝါသနာပါပေမယ့် လည်း ငယ်သေးတဲ့အတွက် ကျောင်းစာကိုပဲ ဦးစားပေး လုပ်စေချင်တာကြောင့် အနုပညာ အလုပ်တွေ ပေးမလုပ်သေးဘူး” လို့ သရုပ်ဆောင် မိုးပြည့်ပြည့်မောင် က ပြောပါတယ်။
”မိဘတိုင်းကတော့ သားသမီး တိုင်းကို အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကို ပဲ ပိုင်ဆိုင်စေချင်တာပါ။ မိုးပြည့်တို့ ကလည်း သားသမီးတွေကို မိဘ အနေနဲ့ သူတို့သွားနေတဲ့လမ်း ကြောင်းကို တည့်မတ်ပေးဖို့ပါပဲ။ ကလေးတစ်ယောက်ကို မိဘရဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ ဘာဖြစ်စေချင်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတာက မကောင်းဘူး လို့ ထင်ပါတယ်။ သမီးလေးက အခုသရုပ်ဆောင် အလုပ်ကို ဝါသနာပါတာတော့ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိုးပြည့်က အခုချိန်မှာတော့ သမီးလေးက ငယ် သေးတာကြောင့် ကျောင်းစာကိုပဲ ဦးစားပေးလုပ် ခိုင်းတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေကိုတော့ ပေး မလုပ်သေးဘူး”လို့ ပြောပါတယ်။
အိမ်ထောင်တစ်ခုတည်မြဲဖို့အတွက် အိမ်ရှင်မ တစ်ယောက်အ နေနဲ့ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းပုံနှင့်ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း ယခုလိုပဲ ပြောပြ ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
”လူတစ်ယောက်မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ မရှိဘူး လားဆိုတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ညစ်စရာတွေရှိ ပေမယ့် ဒါတွေကိုဖြေရှင်းတက်ဖို့ နားလည်မှုရှိဖို့ လိုပါတယ်။ မိသားစုတစ်ခုမှာ အရေးကြီးဆုံးကနား လည်မှုရှိဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်မှုရှိတဲ့မိသား စုက စိတ်ချမ်းသာစရာအချိန်တွေကို အများ ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ညစ် စရာရှိလာရင်လည်း အကောင်း ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင် မှာ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြော ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် မိုး ပြည့်ပြည့်မောင်က လူကောင်သေးသေး လေးဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာမောင် နှမ တွေက ဝိုင်းဝန်းစ နောက်နေမှုအပေါ်ကို လည်း စိတ်မဆိုးမိဘဲ ဝမ်း တောင်သာမိပါသေးတယ် လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
”မိုးပြည့်ကို အနုပညာညီအစ် ကိုမောင်နှမတွေကလည်း ချစ်စနိုးနဲ့ အမြဲတမ်း နောက်ကြပါတယ်။ တီတီ(သရုပ်ဆောင်ပြေတီဦး)ဆိုရင် မိုးပြည့်ကှိုပာဘသူ ပစ္စည်းလေးဆိုတော့ အသေးလေးဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ဒါကလည်း ကိုယ့်ကိုချစ်လို့ အနုပညာမောင်နှမတွေက ချစ် လို့၊ ခင်လို့ နောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုမချစ် ရင် မခင်ရင် မနောက်ပါဘူး။ ဒါကိုလည်း စိတ်ဆိုး စရာမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ကို အဲဒီလိုအသိအမှတ်ပြုပြီး နောက်တာကိုပဲ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်”လို့ ပြောပါ တယ်။
ပရဟိတအလုပ်တွေမှာလည်း ပါဝင်တတ်တဲ့ သူမအနေနဲ့ ပရဟိတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခံစားချက်ကို လည်း ယခုလိုပဲ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
”ပရဟိတလုပ်တာကတော့ မိုးပြည့်က ဝါသ နာပါနေတော့ မလှူရရင် မနေနိုင်ဘူး။ အိတ်ထဲမှာ ပါတာ ကုန်ရင်ကုန်သွားပါစေ။ လှူလိုက်ရမှ စိတ် ချမ်းသာတာ။ ကိုယ် နယ်ကနေမောပန်းပြီး သီချင်း ဆိုပြီးပြန်လာပြီး ရလာတဲ့အနုပညာကြေးချွေးနှဲ စာကိုလည်း လှူတယ်။ အဲဒီလိုလှူလိုက်ရတာကို ကျေနပ်တယ်။ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ပရဟိတ အလုပ်ကို စိတ်ချမ်းသာလို့ လုပ်ဖြစ်နေတာပါ” လို့ သရုပ်ဆောင် မိုးပြည့်ပြည့်မောင်က ဆက်လက် ပြောပြပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် မိုးပြည့်ပြည့်မောင်ဟာ လက်ရှိ မှာတော့ သူမပါဝင်ထားတဲ့ ”မင်္ဂလာရက်မြတ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်း ရုံတင်ပြသလျက် ရှိနေပါတယ်။
BTS အဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် လူကြည့်နှုန်း One Direction အဖွဲ့ကို ကျော်တက်
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် တရုတ်နွေဦးပွဲတော် ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသည့် မြန်မာ ဓာတ်ပုံ ဆရာများကို ဆ?
အမေရိကန် အဆိုတော် ဘီယွန်းစေး ဂီတအကြံပေးအဖြစ် ကူးပြောင်းမည်